တ အမှန် သတ်ပုံကို တစ် အကြံအဖန်မလုပ်ကြသူတွေ လိုက်ရှာတာ တရာကျော်ပြီ။ အက္ခရာစဉ်လိုက် စီထားပါတယ်။ ဝါကျတွေကို အပြည်အစုံမထည့်နိုင်တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဆောရီး။
1. (အကြည်တော်) တကယ်ချစ်တာ သက်သေပြချင်တယ် ဟုတ်လား သေလိုက်လို့ ပြောကြည့် ဘယ်ကောင်မှ မသေဘူး
2. Ahunt Bhone Myat တခါတလေလည်း ပေါက်ဖော် ဂျာနယ်လစ်မလေးဒေ
3. Albert Aung ကမ္ဘာတလွှားက ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေ ၀ိုင်းကန့်ကွက်ကြပြီး အော်ဟစ်နေကြတာ
4. Aqua Thel ကိုယ့်ရှေ့တတတန်းက ခိုင်သင်းကြည် နန္ဒာလှိုင် ရီဝေယံ
5. Ashin Kawwida ယခုပြုရ ကုသလကြောင့် ဉာဏကြီးမား သက်ရှည်လျား၍ ခွန်အားလည်းကောင်း တကြောင်းရုပ်လှ နတ်တမျှတည့် သုခချမ်းသာ ပြည့်စုံပါသည် ငါးဖြာအကျိုးရစေသောဝ်
6. ‎Ashin Yar Nika‎ မြတ်စွာဘုရားက တကယ့်ကို မပြတ်စီးဝင်နေတဲ့ ကုသိုလ်တွေဆိုတဲ့အထဲမယ်
7. Aung Khin တကယ်ကောင်းတဲ့ တုန့်ပြန်ချက်ပါ
8. Aung Moe လူငယ်တယောက်ဆိုတော့စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ပေါက်ကွဲတာ ဖမ်းလဲဖမ်းဗျာ
9. Aung Myo Min တခေါက်မှ မရောက်ဘူးတဲ့ ဖိုလ်ဝင်တောင်နဲ့ ရွှေဘတောင်ကို ဘုရားဖူးဖို့ လိုက်ပေးတဲ့
10. Aung Thu Myint Swe‎ တနေကုန် လှုပ်ရှားလိုက်ရတဲ့ဝန်းလေး
11. Aung Gilbert လူတချို့စဉ်းစားမရတာက မိန်းကလေးတယောက် ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပြီး ရေကူးကန်
12. Aungthu Rain တခုခုတော့ တခုခုကြောင့်ပဲ
13. Aye Lei Tun တညလုံး ဆုတောင်းနေတာ အဲ့ကလေး သူ့အဖေ သူ့အမေနဲ့ မတူဘဲ ငါနဲ့ တူပါစေဆိုပြီ ခုတော့ တစက်မှလည်း မတူဘူး။
14. Aye Lei Tun သွေးရင်းသားရင်း မိသားစုဝင်တဦး ဒီမနက်မှာ လူ့လောကကို ဝင်လာမယ်။့့ နောက်ထပ်အင်အားတခု တိုးမယ်ဆိုတော့ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး တညလုံး ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ဘူး။
15. Aye Maung Thu အတိတ်ကံအကျိုးပေး ပစ္စုပ္ပန်မှာ တဆတိုး အသက်ပင်ငယ်သော်လည်း
16. Aye Thet အစတုန်းကတော့ likeဆိုတာ ကိုယ်တကယ် နှစ်သက်မှ ပေးရမယ် ထင်လို့ သိပ်မပေးဖြစ်ဘူး ခုတော့ တခါတလေ ဘာမှ မထိပဲကြည့် တခါတလေ တရစပ် like ပေးနေပါကြောင်း
17. BrainWave ဉာဏ်လှိုင်း ခြောက်ရက်စစ်ပွဲ နှင့် အစ္စရေး၏ နှစ် ၅၀ ခရီးခြောက်ရက် စစ်ပွဲသည် အစ္စရေးတို့ အတွက် ပြတ်ပြတ်သားသား အောင်ပွဲ ခံနိုင်ခဲ့တဲ့ တခုတည်းသော စစ်ပွဲကြီးလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။့့
18. Chaw Nge‎ တကယ့်အကြောင်းအရင်းကပြည်သူတွေအကျင့်စာရိတ္တပျက်စီးသွားကြလို့ပဲ
19. Child Health Myanmar့့ တအားငိုတဲ့ကလေးတွေဟာ တမင်တကာ အသက်ရှူခဏရပ်သွားပြီးနောက့့် နောက်ဆက်တွဲ လက္ခဏာက ခြေလက်တွေ တဆတ်ဆတ်လှုပ်ခါပြီး တက်သလို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
20. Ellen Grace တခါက ဆံပင်ကို ဆေးသွားဆိုးတယ်
21. FOOD at HOME ရခိုင်မုန့်တီ မုန့်တီဟင်းရည်ချက်နည်း နှင့် မုန့်တီသုပ်နည်းကို ပထမတကြိမ့့်
22. Food, Restaurant Review ကိုယ်တိုင်လဲ ကြိုက်လို့ စားနေတဲ့ ဆိုင်တွေပါ တစုတစည်းတည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
23. Grace Khin တခါတလေတော့လည်း
24. han Htike Myint ‎ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက စိုက်ပျိုရေးဝန်ကြီး ဦးဗဟိန်း ဖုန်းနံပတ် သူဆက်သွယ်လို့ ရမဲ့ဟာတခုခု လိုချင်ပါသည်
25. ‎Han Oo‎ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်။့့ PRESSURE ပန့်တလုံး၊ AIR CON တလုံးပါမည်၊
26. Hau Sian Siam တခါတလေတော့လည်း ကျွန်တော်ဟာ
27. Hello Sayarwon မိခင်နို့တိုက်ခြင်းသည် လွယ်ကူသည်ဟုထင်ရသော်လည်း တကယ်တမ်းကျ ခက်ခဲပါတယ်။
28. Hnin Tin အကြိုက်ဆုံးတွေထဲက အပါအ၀င်တပုဒ် ဒီခေတ်ကသူတွေတော့ ကြိုက်ကြမှာသေချာပါတယ်
29. Honeykhin Mdm့့ တနှစ်မှ တခါ ပဲသီးတယ် တလုံးတည်းသီးတယ် အိပ်မရလို့ အကောင့်တွေ ရှင်းပစ်တာရယ့့် ဘဝက တခါတလေ ဒီလိုကြီးပါလာ့း့
30. Htut Myat's Mar Mar မနက်အစောကြီးက ဖုန်းတခုဝင်လာတယ့့်
31. Ingar Soe တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်များဟာလည်း ပြည်သူတယောက်ချင်းစီနဲ. ဆက်သွယ်ဖို
32. Khin Maung Lay့့ ပြည်ပမှာလည်း ထိုင်း၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူနဲ့ ကိုးရီးယားနိုင်ငံတွေမှာ အတူတူ နေထိုင်ခဲ့ဖူးသူ ညီရင်း တယောက်လိုဖြစ်ရတဲ့
33. Khin Mg Aye ဇနီးသည်ကောင်းတယောက်အပြင် မိတ်ဆွေကောင်းတယောက် အမြဲတမ်း ထောက်ခံ အားပေးသူတယောက် အဖြစ်သာမက
34. Khin Muyar San New York မှာ လုံးချင်းအိမ်လေး သေးသေး လေးတလုံးကို ဒေါ်လာတစ်သန်းလောက်ရှိတယ်
35. Ko Aung Kyaw Myint တကယ်တော့ အမေတွေမှာ
36. Ko Kyi အရမ်းကြိုက်တက်တဲ့အစားစာ မဟုတ်ပေမဲ့ တခါတခါ တော်တော်သတိ့ရသဗျာ
37. Ko Nyo ရိုးသားပြီး ပွင့်လင်းတဲ့ ခရစ်ယာန်တယောက်က
38. Kothetnaing Kothetnaingoo အပင်တပင်၏ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရန် ဝတ်မှုံကူးခြင်းသည်
39. Kyaw Thura Aung ဒေါ်လာ တသိန်းတန် အထိရှိတယ်ဆိုတာ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက်
40. Kyi Lwin အပူတရာ သူတကာတွေ ရှိမှန်းသိပါရဲ့ 
41. Lin Nway Eain ကိုကျော်ကျော်တယောက် ခေါင်းငိုက်စိုက်ဖြင့်လမ်းလျှောက်လာရင်း ခြံတခြံရှေ့အရောက်
42. Ludu လူထုကြီးပွားရေး လူထုဒေါ်အမာရဲ့ အမေ့ရှေးစကား စာအုပ်ပါ မန္တလေးငပိချက်ဆောင်းပါး ထဲက ဒေါ်မိမိလေး မန္တလေးမြို့မှာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းက ကွယ်လွန် သွားပါတယ်။ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ ၉၉ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါ်မိမိလေးဟာ လူထု မိသားစု ရဲ့ မိတ်ဆွေ တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
43. Lway Cherry Pan အားကိုးရတော့မယ့် တအာင်းအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင် တဦးရလာပြီ
44. Lwin Pyin လူတယောက်ရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက် တွက်နည်း
45. Lyin Myat Thu စာဖတ်နေချိန် တခြားအတွေးမဝင်တာက
46. Mar Mar Seinn့့ တခွန်းပြော တခါလွဲ
47. Maung Maung Aung မမြဝင်းမှာ ဓားပြဗိုလ်တဦးက ပြန်ပေးဆွဲခံထားရပြီး သူ့ကိုကယ်တင်နေသော ရဲများဘက်မှ မရပ်တည်ဘဲ ထိုဓားပြဗိုလ်ဘက်မှ ရပ်တည်သော အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်သည်
48. Maung Thet တနပ်စား အကြံတွေချည်းပဲ၊ စင်ကာပူ Giant Supermarket မှာ စိန်တလုံး
49. Mg Khine ဘဝဆိုတာ မိမိဝါသနာပါတဲ့ ကိစ္စတချို့တဝက်ကို ပြုလုပ်နေရတယ်
50. Michael Nyo ဘော်ဒါအပေါင်းတို့ရေ့့ နောက်တခုထပ်တိုးတာက့့ ဒီလိုနဲ့ ရောဂါတွေ တခုပြီးတခု
51. Mie Sim အနောက်ကတယောက်က ပလာတာတွေစားနေတာ စမီး ဗိုက်တောင်ဆာလာပြီ
52. Min Kom‎ နီလာရောင်စုံသဘာဝတွင်းထွက်စင်သန့်မိုးကုတ် အစီးစပ်/ရေစိုစင်/အနာရှင်း ၂၈.၉၇ကလပ် (၃စီး/၅မူး/၃မတ်) တကလပ် ၁၈၀၀၀ ကျပ်ဈေး အရောင့်း့
53. Min Min Kyaw ဓနုဖြူ မြို့ နယ်ရဲ့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ယုံကြည်စိတ်ချလို့ဌာနတချို့မှာ
54. Mischico Nuguchi တကယ်ဆို နင့်ကိုလေ
55. Monywa Thu့့ ကျမသူငယ်ချင်း dr အေးအေးမွန်ဆီကနေ အင်းထုပ်လုပ်နည်းကို ကျကျနနသင်ထားပြီး ဆောင်းတွင်းကြက်သွန်မြိတ်ပေါ်တိုင်း တနှစ်တခါနှစ်ခါတော့ အမြဲလုပ်စားပါတယ်။
56. Mya Thazinwai တနေ့ တနေ့ ကြားရတဲ့
57. Myynt Aung သူကတပါတ်စောအဖမ်းခံရပြီး စစ်ကြောရေးကာလတိုက်ထဲမှာ
58. Nai Win Kyaw ဘာမှ ဖြစ်ပါဘူး... နောက်မိန်းစထွင်းတခုပေါ်လာရင်
59. Naing Phyo Aung Win‎ ပုံ - SMO သူတောင်းစား Training ၂ ပတ်လာ SMO တယောက်
60. Naung Taw Gyi ခြေတစ်လှမ်း
61. Nay Chyi Lin အခုလို တယောက်ထဲ ရေထဲ ဆင်းစိမ်နေသတဲ့ တခြားနေရာတွေလည်း သူက တခြား ကလေးအကုန်က
62. Nay LA စာပိုဒ်လေးတပုဒ်ဖတ်ပြီးအတွေးဝင်လာတာ။
63. Nay Lin Aung ငါတို့တွေမှာတော့ တလတခါကြားရတဲ့စောင်းကြိုးတစ်ရစ်မှာ
64. Nay Zar တနေ့တနေ့ အသက်သာကြီးလာတယ်
65. Ne Winn တခါတရံ အမှတ်မထင် မြင်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေ အကြောင်းအရာတခုခုက ကာလအတန်ကြာမှ တခါပြန်မြင် ပြန်ကြုံတဲ့အခါမှာ
66. Nei Naing တိမ်တွေထိုးထိုးထောင်ထောင် ကောင်းကင်ကြီးကြည့်ပြီး မေတ္တာ။ မေတ္တာပန်းတွေနဲ့ ဖူးခဲ့ပွင့်ခဲ့ရတဲ့ မနက်ခင်းတခုရဲ့ တနေ့တာအဖို့ မေတ္တာ။
67. Ngu War Soe ဘောစ်မမ တယောက် က လက်ဆောင်ပေးဖို့ အားပေးသွားပါပြီရှင့်။
68. Ngwe Sinthoun လူတယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာက
69. Nyein Nyein Win ဆွမ်းကပ်၊သီလယူပြီး ညီအမတစု
70. Phyo Nge‎ ကင်မလာဆရာတယောက် ငှားရတော့မယ် Natural spinel ရည်စီးအစင်အပွင့်လေးတွေကြည့်ပဲရှင့် ကလပ်တရာခန့်ပါတယ်ရှင့့်
71. Phyo Nge‎ Natural peridot တကလပ်ခွဲဝန်းကျင်ပါ 95ct ရှိတယ်ရှင့် လော့ဆိုကုန်သည်ဈေးရောင်းမယ်ရှင့်😄 တကလပ် 6000 နှုန်းနဲ့့
72. Phyo Wai Hlaing မမဆရာမက အေးမြခြင်းနိမိတ်တွေနဲ့ မွေးဖွားလာသူပါ။ တခါကပြောဖူးပါတယ်။
73. Phyo Wai Win ငွေတသိန်း အပ်ပေးထားတာနဲ့ တနှစ်ကြာရင် လေးသိန်းရှစ်သောင်းပေးမယ်။့့
74. Sai KhayLyo တနေရာတခုတော့ပြီးသွားပြီ သျှမ်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကသင်တန်း
75. San Mya Mya Aye တချိန်လုံးအားပေးခဲ့ကြတဲ့ အမျိုးတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
76. Sann Naing သတင်းကောင်းတခုပြောပြချင်ပါသေးတယ် SMIDB လို့ခေါ်တဲ့ မြန်မာ့အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကဝန်ဆောင်မှုတခုပါ
77. SanSan Cynthia Tin ခုတော့လွမ်းစရာ ဆရာဂျမ်းက ဦးမိုးဟိန်းကို စကားတွေပြောနေတာ ခုလည်း မြင့်မြတ်ရာ တနေရာမှာ စကားများလက်ဆုံကျနေမလား
78. Sein Win မှတ်မှတ်ရရ ပြောရရင် မနေ့က ဇောတိကကျောင်းပွဲဝင်တဲ့ည၊ မယ်တင်နဲ့ လမ်းလျှောက်ရင်း ဆရာ ဒေါက်တာသိန်းဇော်ဆီ ဆေးတလုံး ဝင်ထိုးခဲ့တယ်
79. Sein-kyaw Laing့့ ကျနော်ဘွဲ့ရပီးစ တရက် ကိုမိုးဟိန်းက ဒါဂျီလင်အတွေ့အကြုံတွေပြောပြပါတယ်။
80. Soe Soe Win နက်ဖြန်အကိုကြီးမွေးနေ့့ ကြည်နူးစွာ တနေ့တာစတင်။
81. Soelynn Khaing သက်ရာကျော်သစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရ တခုရှိတယ့့် တခြမ်းလောက် ပွတ်ကြိတ်တာခံရဖူးတယ့့် ကျောက်ကပ်တလုံး ပျက်သွားတယ်
82. Su Wai Aung ပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာ သူငယ်ချင်းတဦးက ကျောက်မီးသွေးနဲ့ပါတ်သက်လို့
83. Thant Thant Naing ကျွန်မမှာ ပိုက်ဆံ၂သောင်းရှိလဲ ကျွန်မစိတ်ထက်သန်ရင် ကျွန်မ တသောင်းလှူချင်လဲ လှူပါတယ် တချို့က ထင်ပါလိမ့်မယ် တသောင်းလှူတာ ၁၀ သိန်းလောက်ရှိလို့လို့
84. Thazin Oo တချိန်ကYSC sailors များရဲ့ မိုးယွန်းကြီအင်း ပျော်ပွဲစားခရီး
85. Thein Aung Myint မြင်းခွါတချက် ပေါက်ရင်
86. Thein Htet Soe ခုနေ ကိုယ်တကယ်စိတ်သောကရောက်ပါပြီတဲ့ ဘယ်သူတွေသည် အစမှသည်မဆုံးထိတိုင်
87. Thet Khine Oo ကိန္နရီ ကိန္နရာ တညတာလေးဝေး ရက်ပေါင်း ၇၀၀ဆွေး
88. Thida Myin လူတွေကဝိုင်းဖျက်ကြတယ် ဒါပေမဲ့ မုံရွာမန်းလေး ကုန်စည်ပို့မယ် ကားတစီးဝယ်ဖို့ ပြောထားပြီးပြီလေ
89. Thida Thida စာအုပ်တအုပ် လက်ဆောင်ပေးချင်၏။
90. Thu Ra Phyo Wai တချိန်က ကိုရီး... 🎼တကယ်တော့ ကျောက်တူးသမားများဟာ🎼 လောပန်းလောင်းတွေပါ
91. Thura Soe အင်္ဂလိပ်ကနေ မြန်မာကို တကယ်တန်း ဘာသာပြန် တခါတလေတော့လည်း နုကြည့်တာ 😁😁 ကုတင်ဘေးကို ဒီလိုက်ကာလေးခြားထားတာ ဝယ်ထားတာကြာလှပြီ တခါတပ်ပြီး စိတ်ရှုပ်လို့မတက်ဘဲ့့
92. Tin Mar Wai ဆေးကဒ်တကဒ် လူကြိဲထည့်ပေးချင်လို့ပါရှင့်။
93. Tin Maung Naing Jadeite Jade ring (silver) တကလပ်ခွဲဝန်းကျင်ဆိုဒ့့်
94. Tin Maung Nyunt တရက်ပျော်ခြင် အရက်သောက် တပတ်ပျော်ခြင် ခရီးထွက် တလပျော်ခြင် မိန်းမယူ တနှစ်ပျော်ခြင် ချစ်သူထား တသက်ပျော်ခြင် သစ်ပင်စိုက်...
95. Tin Myint Moe တနေ့နေ့မှာတော့ လူတိုင်း တယောက်တည်းနေရမှာပါ
96. ToeToe Win လျော့ကြိုး ကုန်ချိန် 😔 တခါ တခါ တင်းထားရတဲ့ စိတ် ကို လျော့ချလိုက်ရင်
97. U Lay Aps့့ အိုကေပီလို့ ထင်တဲ့ သူမှာ လိုရင်းကို မရောက်နိုင်ပဲ စကားများရက်တရက် မခေါ်မပြောတရက် ရှင်းလင်းရက်တရက်
98. U Nyan Lin မနက်ကဆေးစစ်တယ် အဲ့နားက sweet potato bun တလုံး တဒေါ်လာ စားလိုက်တယ်
99. U Tin Lin မိမိမျက်စိကိုပင်မယုံချင်။ ဟိုတယ်တခု၏...
100. U Tin Wynn Myint ယခုပုံနှင့် စာမှာ တနာရီခွဲလောက် ကြာပါလိမ် မည်။
101. VOA Burmese NewsLike Page ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ DVB သတင်းထောက်နှစ်ဦးနဲ့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက သတင်းထောက်တဦးကို့့
102. Wai Ls တခါက မြောက်ဒဂုံမှာ ခြံဝယ်မလို့ဟာ
103. War War တလတခါတွေ့ချင်ကြတဲ့ ကျောင်းတုန်းက ချစ်သူငယ်တွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး
104. Yae Tay Za မောင်ချောနွယ်တို့ လူညိုချောတို့ ဘာတို့တောင် ရှိသေးတာဆိုတော့ ပိုခန့်ချင် ခန့်သွားမှာ နာမည်တလုံး အဆုံးခံပြီး မိုက်လို့မဖြစ်ဘူး 😁 နောက်တလုံး ပြောင်းမယ့့်
105. Ye Naingthinn တခေတ်တခါက ဘန်းစကား
106. Ye Thagyan Tun ဒီမယ် မအေးသောင်း တကယ်ဆိုကျုပ်က ခင်ဗျားကို ဖေ့စဘုတ်မှာ တကျော့ပြန် နာမည်ကြီးတော့မှ
107. Yin Ko Oo တိုင်းပြည်တခုရဲ့အခြေခံ လူသားအရင်းအမြစ် တိုင်းပြည်တခုမှာ လူသားအရင်းအမြစ် မဖွံ့ဖြိုးတရွေ့ 
108. Yoon Yoon အမှန်တကယ်က အဲ့ဒါရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး..
109. Zarni Maung ဖွားဖွားတယောက်ရထားပါကြောင့်း့
110. Zaw Min-Oo ဒီလိုအသုံးချနယ်ပယ်အတွက် သင်ကြားခြင်းမဟုတ်ရင် အင်္ဂလိပ်စာဟာ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကားတခု ဖတ်တတ်ရုံ သာမန်ရေးပြောတတ်ရုံထက် ပိုပြီးမတတ်ပါဘူး။့့ ဖွင့်ဆိုသူဟာ များသောအားဖြင့် ရှင်မဟာဗုဒ္ဓဃောသဖြစ်နေပြီး (ဆိုလိုတာက တဦးတည်းလက်ရာ တဝါဒသန် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌအသုံးနဲ့ဆိုရင် တသာသနာလုံး
111. Zaw Win ၂ဝဝ၈ ခြေဥပြင်ဖို့ လူတသိန်း တသန်း တတိုင်းပြည်လုံ့း့ တနှစ်သားကျော်ကျော်
112. Zaw Win Hlaing ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ လူ့လောကကြီးကို တကြိမ်တခါပဲ လာခွင့်ရပါတယ်။
113. Zclinn Linn ခဏနေများ လောကကြီး ပျက်သုဉ်းသွားတော့မယ်ဆိုရင် တခါပြန်ပွေ့ချီပါရစေ အဖေ့ရဲ့ သားရေ အတောင်မစုံသေးခင် အတိတ်မှာ တခုခု တာဝန်မကျေတာ ခွင့်လွှတ်မှာလားကွာ့့ အမှန်တရားကကွယ် တခါတလေ နောက်ကျတယ် မပျက်မကွက်တော့ တနေ့အသေအချာ လာမှာပဲ
114. Zin Hnin ချစ်ခြင်းမှာမျက်ရည်စတွေနဲ့ .. .စကားလုံးတွေပျောက်ဆုံးသွားတာဟာ ဇတ်လမ်းတပုဒ်
115. ကိုဇော်သန်းဝင်း ကိုဇော်ကြီး‎ ယခုမြင်ရတဲ့ပုံပါ စက်ပစ္စည်း တခုဟာ့့ ၂၁ ရက်နေ့ည မုံရွာမြို့ နဲ့ ယင်းမာပင်အကြားတနေရာမှာ ကောက်ရတဲ့သူအဖို့ သံတိုသံစတခုအဖြစ်သာအသုံးဝင်ပေမဲ့့
116. စာအုပ်နှင့်သီချင်းlinkများ&NewsLike Page တောင်းဆိုချက်တွေ တပတ်အတွင်းမပေးရင့့်
117. စိတ်ပြူတင်းပေါက် သတိပဋ္ဌာန် အဖေါ်ကို အဖော်ကောင်း ဖြစ်လာအောင် သေသေချာချာ ကြိုးစားရမယ်။ တကယ်တော့ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ
118. ထိပ် ထား ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုဗဟိန်း နှစ်တရာပြည့် တင်ပြချက် မြင်းခွာတချက်ပေါက်ရင် မီးဟုန်းဟုန်း တောက်စေရမယ်ဆိုပြီး ၁၃၀၀ ပြည့် ရေနံမြေအလုပ်သမားသပိတ်မှာ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ့့
119. နည်းစနစ်ကျကျ အတွေးအခေါ် စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး main stream အယူအဆ နောက်တခုရှိသေးတယ်။
120. မမ မိုး အမျိုးဘာသာသာသနာတော်ကြီးကိုလဲ တကယ့်ကိုအလေးထားခဲ့ တာပါ
121. မိုး သူ တကယ်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဦးနေဝင်းဟာ သမာန်ရိုးရိုးသားသား သေသွားခဲ့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။့့ မဟုတ်မခံစိတ်ကလဲ အလွန်ပြင်းထန်သူတယောက်အဖြစ်
122. အရှင်ဝိသုတ (မြင်းမူ) တချို့သောအရာတွေဟာ ကျရှုံးနေပြီလို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တန်းက
123. ဦးကိုနီအမှု ဓါတ်ပုံပါစာ = တာဝန်ကျဝန်ထမ်းတယောက်က လမ်းဖွင့်ပေးပြီး ပြန်ပိတ်တယ် နောက်တယောက်က လက်ပြလမ်းညွှန်တယ်။
124. ကျော်ဇင် ထွဋ်‎ တန်ဖိုးနည်းမြေကွက်များ ပေ (20×60) တကွက်လျှင့့်
125. မောင်မောင် (တောင်တွင်း) တကယ်ကို အပြက်အပြက်နဲ့ပါပဲ
126. သော်တာ-ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆေးစွမ်းကောင်းများစွာကို တနေရာထဲ အစုံဖတ်နိုင်ဖို့့